Farqiga of siyaasadda ganacsi ay sabab u tahay meesha uu qowladda pachinko ah (Station Wakiilada & dukaamada magaalada hareeraheeda ah)
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Farqiga of siyaasadda ganacsi ay sabab u tahay meesha uu qowladda pachinko ah (Station Wakiilada & dukaamada magaalada hareeraheeda ah)
dukaan kasta, waxaan u malaynayaa in uu yahay ganacsi la aaladaha kala duwan by xaaladaha goobta samaynaya. Pachinko waa laga reebo lahayn, waxaan leenahay tallaabooyin kala duwan oo kala duwan, ganacsatada, iyo samaynta iyaga u gaar ah image dukaanka by xaaladaha goobta. Tusaale ahaan, hore ee dukaamada idaacadda iyo dukaamada magaalada hareeraheeda ah, farqiga u yahay muuqaalada waaweyn. Aynu is barbar dhigaan farqiga u ah in wakhtiga ugu saldhigga macaamiisha iyo hawlgalka peak.
■ tii pachinko si ay u fuliyaan ganacsiga ee zone markii
Station hor qowladda pachinko saldhigga saldhigga macaamiisha iyo peak orodka ah, dukaamo qarka u saaran in badan oo gaadiidka dadka lugeynaya bartamaha magaalada. Waayo, meel u dhow saldhigga tareen, iyo shaqaalaha xafiiska ka mid ah hooyooyinka iyo dadka waayeelka ah iyo habka shaqada ka dadka yar yar iyo haweenka, waxaan filaynaa saldhig macaamiisha ah ee kala duwan oo da 'ah. Gaar ahaan, dhaqanka this badan yahay maalmaha shaqada. In ka badan fiidkii subaxdii, waxaa wanaagsan, sida hooyooyinka iyo waayeelka badan, gaar ahaan wuxuu noqon doonaa naag band inta badan waa wakhti.
Laakiin hore ee hawlgalka peak saldhigga waa sida halkan ka. Laga soo bilaabo fiidkii soo baxay dib waa ka sii wanaagsan, oo la socda in ay dukaanka ka subax
, si la bedelay, markan shaqaalaha mushahar shaqada ka dib waxay bilaabi doonaan in lagu xisaabiyo inta badan ee howlgalka. Sida laga soo xigtay waqtigan, waxa faa'iido ah ee aad u daran saldhig macaamiisha waa, 's feature ugu weyn ee hore ee dukaanka saldhiga.
halkaas oo ay jiraan waqtiga ah dumiso hawlaha hadalkas, sababtoo ah waxaa jira macaamiisha in ay noqon tuuraa xataa saldhiga xoog leh, waxay yeelan doonaan sida mid ka mid ah doorashooyinka ayaa sidoo kale sababta oo ah waxaa ujeedadoodu tahay.
saldhigga kulul ka hor tartanka, dukaanka ma soo jiidan karaan macaamiisha at 7 pm ama 8 pm maalmaha 6 subaxnimo, waxa ay leedahay badbaadada uu noqonayaa adag.
(※ By habka, haddii dukaanka uu leeyahay si ay ula qabsadaan kubada baxay Maxaa la ROM Yara Horukon, doorasho waa in la soo qaado off zone waqti this.) _ x000D_
Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha mushahar fasaxa waa maalin fasax ah, qalliinka peak iyo fiidkii ka duhurnimo, waxay noqon doontaa socodka iyo maalmaha gabi ahaanba ka duwan. Intaa waxaa dheer, maxaa yeelay, inta badan dukaanka tartanka, xataa sida ugu dhakhsaha badan kubada ka mid ah dukaamada kale, hawlgalka aad u badan is badali doontaa.
■ saldhig macaamiisha qowladda pachinko hareeraheeda iyo peak In zone markii
hawlgalka click, oo waxaad ku tidhaahdaa waxa ku saabsan dukaanka magaalada hareeraheeda ah, ma filan size saldhigga macaamiisha ku saabsan dukaan Station. Isagoo ka hadlayay of macaamiil, oo aabbe u ahaa hooyooyinka xaafadda iyo inta aad, da'da sidoo kale waa at sare ah, waxaan arki badan oo muuqaalka qofka, sida 60 ka 40eeyaha. guests
heerka aqoonta waa ay yar yihiin, waa dad badan, sidoo kale waxaa jira isbeddello badan oo waa miiska macaan madhan saldhigga xoog iyo sixitaanka cidiyaha.
ilaa iyo inta ma aha makhaayad caan ah oo ku filan inuu u soo yeedho warkeeda ee agagaarkeedii qowladda pachinko ah, kuwaas oo la dhigto waxaa la booqday baabuur ama mootooyinka ama la mid ah, iyada oo ay jirto, Taas micnaheedu ma aha si ka badan, sidaa darteed xataa kuwa la socda dukaanka ka soo saacadihii hore ma in badan waa status quo.
inta badan, sababtoo ah haddii aad ku nooshahay xaafadda aad ku imaanayo dukaanka, ordaya waa bilaabi muruqa at 12 subaxnimo ka hor iyo ka dib galabtii, wax soo saarka ugu sarreysa yeelan doonaan dukaamada badan 3:00 pm laga bilaabo 1 pm. Iyo, aad dukaanka hareeraheeda uu jiro farqi yar oo u dhaxeeya howlgalka ugu sarreysa ee maalintii ee toddobaadka. Xataa haddii uu jiro dukaan ku tartamaya, sababtoo ah ma aha in u dhow, waa ay fududahay in ay ku riday a macaamiisha go'an.
waa in ay ka faa'iideystaan ??ceelka dagaal ku salaysan qaababka kuwan ???
1. Sidoo kale maamula zone waqti dukaanka
ee meesha ugu sarreysa, sababtoo ah waqtiga at kaas oo qaliin la kordhiyay waa ka duwan yahay, waxaa ka mid ah istiraatiijiyadda waa in uu u qaado off markii ugu kulul ee maalinta. Sida qowladda pachinko ah, dabcan, sababtoo ah qofka uu kubad ka soo baxay waxyaabo badan oo marka uu jiro heerka isticmaalka sarreeya lama sameeyo si racfaanka ee dukaanka, waxaa halkaas ma dooneysa.
2. At waqtiga at kaas oo wakhtiga
macaamiisha macaamiisha wareegay waydaartaan waxay doonaan inay miiska macaan saldhigga xoog iyo qori dhidib ah ay u badan tahay in ay qaataan. Tani waa sababta oo ah, tusaale ahaan, in ay dhacdo hooyooyinka, iyo waxa ay noqon doontaa wax dhib ah maleh sida u dhintaan waa xoog badan yahay, sidaa darteed ma aha inay diyaarinta cashada, Waxaan leeyahay dad badan oo in dib u lahaa arrimaha dibedu. Pachipuro in kasbada in istaraatijiyad in safaree madal noocan oo kale ah ayaa sidoo kale ka jira. _x00 0D_
3. By cilmi heerka aqoonta
saldhig macaamiisha ah ee macaamiisha, waa sababta ay la fahamsan yahay in heerka dhagaystayaasha kii. Heerka waxaa sidoo kale waa wax macquul ah in meesha haysa madhan delicious ugu hooseeya ee dadka inta badan dukaanka. Dabcan, xaqiiqda ah in dadka qaba heer sare ah ma aha xataa hal qof, laakiin in ay u badan tahay in ay noqoto in xaqiiqda ah in dukaanka laftiisa leedahay dhadhan lahayn, Sajikagen dhinac ka socda oo kaliya in ay turxaan-aragnimo ah ee dagaalka aad maayo.